Fiilmii seena galmeessaa kan qopheessu Maayikil Paak waggoota lama oliif muudamanii raggaasisamuuf eegaa turan, garuu ssababaa dimokraatonni dhimma maallaqaan wal qabate kan daldala isaanii ilaalchisee jiru irratti yaaddoo qaban dhiyeessaniif hamma amaatti ture.
Erga waajjirri abbaa alangaa muummichi kan Washington DC Paak maallaqa dhaaba isaanii kan bu’aaf hin hojjenne dantaa ofiif fayyadaman yoo ta’e qorannaa geggeessuu jalqabee booda sagalee kennuun koree Sanaa ammas boodatti harkifate.
White House booda irra waa’ee muudammi sun lafa irra harkifachuu komee dhiyeessuu dhaan Traamp Paakiin ni deggeru jedhe.
Ennaa wal ga’ii kamisa kaleessaa seneteroonni dimokraatotaa hedduun ammas hanga Paak waa’ee maallaqa isaanii ilaalchisee yaaddoo jiru irratti ibsa kennanitti ykn hanga waajjirri abbaa alangaa muummichi kan DC qorannaa isaa xumurutti sagalee kennuun akka turuuf kan gaafatan fudhatama hin arganne.
Demokraatichi miseensi koree Sanaa Boob Menendez akka jedhanitti akka kootti Maaykil Paak dirqama irra jiru hin kabajne, dhimmootii hedduu irrattis amanamummaa hin agarsiisne jedhan.
Koreen Ripaablikaanotaan hoogganamu kunis muudamni kun paartileen lamaan irratti mari’atanii akka hin taane godhan jedhan.
Menendez itti dabaluu dhaan dura taa’aa koree Sanaa kan ta’an Jim Rischn, yaaddoo dimokraatonni miseensota koree Sanaa ta’an yaaddoo qabaniif deebii kennuf iyyuu tole hin jenne ittiin jedhan.
Rishch akka jedhanitti koreen sun muudama ssana dhiisuuf qophaa’ee ture. Yoo ministriin haqaa kan US ni morma ta’e nutis akksuma goona, sun immoo hin taane jedhan.
VOAn dubbi himaa Rischiin ibsa itti dabalaa akka kennaniif gaafatee jira. Menendez yaaddoo dimokraatonni qaban kan Paak hariiroo dhaaba isaanii bu’aa fi hin hojjenneef kan bu’aa irraa argatan gidduu ilaalchisee raga dogoggorsaa tajaajila galii biyya keessaa IRS,f dhiyeessan ilaalchisee jiru koree sanaaf dhiyeessaniiru.
Kampaniin fiilmii Paak, kan Manifold Productions, Inc jedhu dhaaba bu’aaf hin hojjenne kan Paak biraa gargaarsa miliyoonaan laka’amu fudhataniiru jedhan Menendez.
Haa ta’u malee IRSf kan isaan gabaasan lamaanuu gidduu hariiroon hin jiru ka jedhu, garuu lamaan isaanii isaantu hooggana jedhan.
Menendez odeeffannoo dogoggoraa kennan fi dilaala mootummaa baasuu isaanii sireessanii IRS fi koree kanaaf dhiyeessuu qabu jedhan.
Menendez akka jedhanitti galmee hariiroo dhaaba bu’aaf hin hojjenne kan isaanii fi daldala isaanii gidduu jiru, odeeffanoo daldalaa akkaan barbaachisu gaafataman koree kanaaf hin dhiyeessine.
Dantaan daldalaa baay’ee cimaa dha kan seneteoonni US odeeffannoo icitii qabu xiinxaluun irra jiraatu illee arguu hin dandeenye jedhan Menedez.
Menendez kaleessa galgala viidiyoo marii Sanaa kan sagalee qofaan darbe ifa godhanii jiru.
Ibsa sanaanis Menendez akka jedhanitti jalqaba torban kanaa dimokraatonni koree hariiro alaa senetiin hoogganamu keessa jiran martinuu dura ta’aa kan ta’an Rishiif erguu dhaan miseensonni sabaa himaaf uummati Ameerikaa adeems asana akka hin hordfne gochuuf tarkaanfii fudhatan akka hambisaniif gaafii hedduu gaafataman hin simanne jedhan.
Riish akka jedhanitti wal ga’iin sun akka hin darbine gochuun wal ga’iin ennaa vaayiresii koronaa wal irraa hiiqiinsaan geggeessamuu isaaf akkasumajs kutaan wal ga’iin sun keessatti geggeessame immoo sagalee waraabamee darbu qofaaf mijata jedhan.
Prezidaant Tramp waggoota lama dura Paak USAGM dhaaba sabaa himaa addunyaa kan US akka hooggananiif kan muudan. Sababaa dimokraatonni na danqaniif lafa irra harkifate jechuun mufannaa qaban dhiyeessaa turan.
Prezidaantichi kana dura kaadhimamaa isaan muudan akka sagalee irratti kennaniif deebisanii akka wal ga’an gochuuf dhaafaanii turan.
White House torban darbe dimokraatonni muudama kana danqan jechuun kan qeeqe, erga gabaasi abbaan alangaa muummichi Washington qorannaa akka geggeessu dhaga’amee booda, prezidaantiin Maayikil paakiin ni deggeru, mufataniirus, garuu hin dinqamne. Dmokraatonni homaa gochuu hin dandeenye hojjetaa uummataa galmee qulqulluu qabutti dhoqqee dibuu barbaadhu jedha ibsichi.
Torbanneen dhiyoo Tramp VOA waa’ee rakkoo vaayiresii koronaa Chaayinaa keessaa ilaalchisuun gabaasa inni dhiyeesse qeeqanii jiran. Ennaa waa’ee muudama Paak torban darbe gaafataman Traamp akka jedhanitti Raadhiyoon sagalee Ameerikaa haala sirrii hin taaneen geggeessamaa jira. Isaan sagalee Ameerikaa utuu hin taane faallaa isaa ti jedhanii turan.
Daayirikterittiin VOA Amaandaa Bennet dhaaba sabaa himaa mootummaa Ameerikaan deggeramuu kanaaf falmuu dhaan ibsa jimaata darbe baasaniin beeksisaniiru.
Amaandaan akka jedhanitti nuti mirga heera irra taa’ee jiru isa jalqabaa uummata naannoo addunyaa kanneen odeeffannoo dhugaa fi sirrii ta’e hin argannetti beeksisne jedhan.
“kanaafi jedhan Amandaan dhaggeeffattoota keenya miliyoona 280 keessaa dhibba irraa harki 80mni tamsaasa keenya afaanota 47n darbuu fi biyyoota 60 ol keessa jiran hojiin keenya amanamaa ta’uu isaa kan mirkaneessaniif.
Dhaabbati oduu addunyaa kan US caasaalee sabaa himaa siivilii VOA dabalatee , Radio Free Europe, waajjira Cuba Broadcasting, Radio
Radio Free Asia (RFA), fi Buufata tamsaasa afaan Arabaa Alhurra Television fi Radio Sawa tamsaasa giddu galeessa bahaa (MBN) jedhamu to’ata.
Baatii fulbaanaa keessa Paak ennaa dhuga ba’umsa kennaniin, yaaddoo dhaabolii USAGM jala jiran kan seerri US gabaasa madaalawaa fi dhugaa irratti hundaa’e akka dabarsu VOA dabalateea dhiibbaa siyaasaa irra kaa’uu malu jedhu ilaalchisee dubbatanii turan.
Paak koree sanaaf ibsa kennaniin dhaabbatichi amantaa odu gabaastonni isaa walaba, dhiibbaa siyaasaa fi attamiin akka isaan gabaasan itti himuu jalaa walaba amantaa jedhu irratti kan hundaa’e jedhan. Wal amantaa akka Sanaa yoo jiraate malee akkan yaadutti dhaabbatai kun dhaabaticha dadhabsiisuu ta’a jedhan.